रात्री समयमा बेनी-जोमसोम सडक बन्द
नबनिर्बाचित अध्यक्ष रञ्‍जित तामाङद्वारा पदभार ग्रहण
बाढी पिडित सहयोगार्थ म्लाङ प्वाँहार बिशेष प्रदर्शन हुने
हवाई इन्धनमा गुणस्तरहीन
दरबारमार्गको चार पसल शिलबन्दी
कतारमा म्हेन्दोमाया सांस्कृतिक साँझ सकियो
अनुले ‘कम्मर मर्काई’ पछि (भिडियो)
भिमफेदी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा स्याङ्तान चयन
म्हेन्दोमाया गीत 'मखमली चोलीले' (भिडियो )
१० ठाउँमा शिविर राखेर फास्ट ट्रयाक निर्माणमा तीव्रता दिइने
अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्षमा रञ्जित तामाङ
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आतंक मच्चाइरहेको टेस्टोनी घातक एप्स कसरी हटाउने ? (हेर्नुस भिडियो)
सूचना प्रविधि तामसालिङ् खबर प्रकाशित मिति: २०७४ श्रावन २० शुक्रवार
साउन २०, काठमाण्डौ :
यसरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आतंक मच्चाइरहेको टेस्टोनी डटकम निकै घातक एप्स हो । यसले फेसबुक प्रयोगकर्ताको निकै गोप्य म्यासेज समेत आफ्नो डाटामा कलेक्सन गरेर राखेको हुन्छ ।
‘एप एक्सेस गरेपछि सुरुमै सोधेको हुन्छ, फेसबुकसँग जोडिने हो भनेर ? यसरी जोडिँदा यो एपले प्रोफाइल भित्रै छिरेर सबै कुराहरु रिड गर्छ । इन्फरमेशन लिन्छ,’ कम्प्युटर इन्जिनियर तथा वेभ मास्टर दिपेन घले भन्छन्,‘यो अमेरिकाबाट नै चल्ने हो । यो प्रयोग गर्नु राम्रो होइन ।’ उनका अनुसार फेसबुक नै ह्याक हुने संभावना भने न्युन छ ।
तर अर्का विज्ञ कम्प्युटर प्रोग्रामर टुरुप संग्रौला भने फेसबुक प्रयोगकर्ताको आफ्नो एकाउन्ट नै खतरामा पर्ने तर्क गर्छन् । ‘यो सबै पैसाको खेलो हो । पैसा कमाउनका लागि यो एपको प्रयोग गरिएको हो । गुगल एड मार्फत पैसा कमाउनका लागि फेसबुक प्रयोग कर्तालाई पंगु बनाइएको हो,’ उनी भन्छन्,‘फेसबुक प्रयोगकर्ताको म्यासेजहरु हेर्दिनसक्छ । भाइरसको खतरापनि उत्तिकै हुन्छ । यो मुल रुपमा मार्केटिङ प्रपोज नै हो ।’
यस्ता एप्लिकेशन प्रयोग गर्नेहरुको जिज्ञासाको उत्तर समेत ‘¥यान्डमली’ मिलाएर राखिएको हुन्छ । त्यसैले अधिकांशको उत्तर समेत मिलिरहेको हुन्छ । ‘तपाईंलाई यो एपले डाक्टर बनाउँने पनि होइन, म्यादी प्रहरी बनाउने पनि होइन । उल्टै तपाईंको मुर्खतालाई प्रयोग गरेर गोप्य सुचना समेत चोरी हुने खतरा हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘आफू मुर्ख बनेपनि शेयर गरेर अरुलाई मुर्ख नबनाउनुस् ।’
कसरी हटाउने ?
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो एप्स आएर सताइरहन्छ भने राइट साइटमा रहेको बटन क्लिक गर्नुहोस् र टेस्टोनी डटकमलाई अनफलो गर्नुहोस् । या तलका केही भिडियो हेरेर समेत स्केप गर्न सक्नुहुनेछ ।
भदौ २१, बेनी ।
भदौ २०, काभ्रे ।
भदौ २०, काठमाडौ :
फुलमानको नीरफूलमा भिन्न भूमिकामा देखिदै 'दयाहाङ'
भदौ, २ हेटौडा :
तिम्रो त्यो मनमा भन्दै आए प्रदिप (भिडियो)
साउन २२, हेटौडा :
किन लेखिएन ताम्सालिङ र तामाङ समुदायको इतिहास ?
भदौ १, काठमाडौ :
उर्लियो राप्ती, हेटौडाको विभिन्न क्षेत्र डुवानमा (फोटो फिचर)
साउन २८, हेटौडा :
रेडियोमा तामाङभाषा कार्यक्रमको बिगत र वर्तमान अवस्था
गाउँलाई उठाउनु सजिलो तर शहरलाई ब्युँझाउनु गा¥हो
शिक्षक र नेताको बोली
विश्व आदिवासी दिवस र जनजाति आन्दोलनको बाटो
साउन २३, काठामाडौ :
टेस्टोनी आतक र हल्लै हल्लाको हाम्रो देश
संजय लामा तामाङ
रेडियो तामसालिङ अनलाईन, हेटौंडा
हेटौंडा उपमहानगरपालिका - ४
पारिजात पथ,शितलमहल चोक, हेटौंडा
फोन : ९८५५०७२८९०, ९८४५५१३७८९
388047	Times Visited.